60 Kamid Ah Warshadaha Ugu Caansan Ee Wadanka Itoobiya oo Musallafay Kadib Kacdoon Wadanka Ka Dillaacay.
Thursday February 16, 2017 - 11:34:49 in Wararka by Super Admin
Xaalado aad u liita ayaa lagasoo sheegayaa qeybo katirsan gobollada wadanka Itoobiya ee dhaca bariga qaaradda Afrika.
Xilli kacdoon shacbi oo aad u xooggan uu ka socdo Itoobiya ayay ciidamada melleteriga iyo kuwa ammaanka geysanayaan gabood fallo dhan walba ah.
Hay’adaha sheegta in ay u doodaan xuquuqul insaanka ayaa Nidaamka Addis Ababa ku eedeeyay in kumanaan qof uu xabsiyada ku guray islamarkaana jirdil iyo tacdiibin ay u dhinteen boqolaal qof.
Sida ay baahisay shabakada Ethiopian Media kacdoonka wadanka ayaa sababay in ay xirmaan warshado iyo suuqyo ganacsi oo kuyaal hareeraha Addis Ababa.
Dad u warramay Wargeyska Washington Post waxay sheegeen in Bandawga wadanka lagusoo rogay uusan waxba soo kordhin balse hoos udhaca ku yimid kacdoonada iyo rabshadaha loo sababeyn karo Nidaamka oo geysanaya xarig sharci darra ah dadkuna ay ka baqeen xariga iyo dilalka.
Shabakadda ayaa sheegtay in 60 kamid ah warshadaha ugu caansan wadanka Itoobiya ay shaqada joojiyeen islamarkaana kumanaan shaqaale ajaanib ah ay dalka isaga baxeen.
Dad caraysan ayaa ku xoomay deegaanada Warshadaha ee Addis Ababa waxayna ku guuleysteen in ay gubaan matooradii warshadaha iyo qalabkii muhiimka ahaa taasi oo keentay in ay howlgab noqdaan warshadahan oo qeyb weyn ka ahaa ganacsiga ay Itoobiya ku naaloonaysay 15-kii sano ee lasoo dhaafay.
Gobollada Oromada iyo Amxaarada ayaa wali lagasoo sheegayaa kacdoono ka dhan ah Nidaamka kajira wadanka Itoobiya, saraakiisha mucaaradka waxay sheegayaan in kumanaan katirsan ciidanka Melleteriga ay hareereyn kusoo rogeen dhowr magaalo oo kamid ah meelaha kacdoonadu ka socdaan.